စူပါအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းကိရိယာ 5x | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » စူပါအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းကိရိယာ 5x
စူပါအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းကိရိယာ 5x APK ကို
စူပါအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းကိရိယာ 5x သာမန်ထက်ပိုမြန်ဘက်ထရီကိုအားသွင်းကူညီပေးသည်!
အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းကိရိယာဘက်ထရီမာစတာ အဆိုပါအားသွင်းမြန်နှုန်းအဘို့သင့် device ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်ဟုအကြီးအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းဖြေရှင်းချက်!
သင်အားသွင်းစက်ကို plug အခါ, အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းကိရိယာဘက်ထရီ အလိုအလျှောက်ပိုမြန်သည့်အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန် "Start ကို" ကိုနှိပ်ပါ, activated လိမ့်မည်။ quick charger ကို နောက်ခံ running အားလုံး apps များကိုသတ်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော wifi, 3G, မိုဘိုင်းအင်တာနက်, ဘလူးတုသ်အဖြစ်ဘက်ထရီန်ဆောင်မှုများစားသုံး ... ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေမည် ပိုမိုမြန်ဆန် charging။ သင် "Stop" သို့မဟုတ် "Exit ကို" ပေါ်တွင် click လုပ်သည့်အခါရှိသမျှသောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အချက်ပြကိုထပ်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။
စူပါအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းကိရိယာ 5x charging ၏မြန်နှုန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးမြှင့်မသာ။
- အော်တိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း Ram နဲ့ Optimize ဘက်ထရီ Saver
- အလိုအလျောက်အစာရှောင်ခြင်း optimization charging: Ram အာနိသင်တိုးမြှင့်, wifi ကို turn off ဘလူးတုသ်ကို turn off, Screen Brightness ကိုမိနစ်လျှော့ချ ...
- ပြရန် infomation ဘက်ထရီ: အပူချိန်, ဗို့အား, မော်ဒယ်, ဘက်ထရီကျန်းမာရေး, ဘက်ထရီနည်းပညာ, android version ကို ...
- အပြည့်အဝဘက်ထရီနှိုးဆော်သံ: အချက်ပေးဘက်ထရီအပြည့်အဝအခါ
- အတော်များများကထုံးစံ interfaces: အမှောင်ဆောင်ပုဒ်, အလင်းဆောင်ပုဒ်။
- android ဖုန်းအဘို့အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်းနှင့်အမြန်အားသွင်း 2018
- စူပါ Fast အားသွင်းကိရိယာ 5x အစဉ်အမြဲအခမဲ့ဖြစ်ပြီး !!!
စူပါမြန် 5x အားသွင်း Oppo F5, LG က V30, V20, Nexus 5x, 6P, က Xperia XZ, XA, Xiaomi က4မှတ်ချက်, က Galaxy တူသောနောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းများအများအပြားမျိုး 8, က Galaxy S8 ပေါင်း, က Galaxy S7 မှတ်ချက်သင့်လျော်သည် ...
- ပိုပေါ်တူဂီ, ဘရာဇီး, စပိနျ
- Big မွမ်းမံခြင်း: interface ကိုဆက်တင်များ, နှိုးဆော်သံအပြည့်အဝဘက်ထရီ
- ( ... android 8.0 oreo, 5.0,5.1,4.4) bug တွေ Fix
- နယူးနည်းပညာ: Fast အားသွင်း
- လိုလားသူဗားရှင်း (ကြော်ငြာမပါ) Add
3.01 ကို MB